အညာမြေရောက် တောင်ပေါ်သူလေးများရဲ့ ရင်ခွင် - Kanbawza Tai News
ကမ္ဘောဇတိုင်းသတင်းဂျာနယ်သည် တောင်ကြီးမြို့တွင် အခြေစိုက်၍ ထုတ်ဝေခွင့်အမှတ် (မြဲ-၀၁၀၇၉)ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည့် တရားဝင် သတင်းမီဒီယာ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
Home ဆောင်းပါး အညာမြေရောက် တောင်ပေါ်သူလေးများရဲ့ ရင်ခွင်
အညာမြေရောက် တောင်ပေါ်သူလေးများရဲ့ ရင်ခွင်
June 29, 2020 ဆောင်းပါး,
`ပအိုဝ်း တိုင်းရင်းသူက ၄၁ ယောက်ပါ ဒကာကြီး`
`၁၀ တန်းဖြေထားတာက တစ်ယောက်၊ ၁၀ တန်းတက် မည့်သူက ၆ ယောက်၊ သူငယ်တန်း(KG-1)ပေါ့နော် ၁ ယောက် အပါအဝင် ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသူ စုစုပေါင်း ၄၁ ယောက်ပါ ဒကာ ကြီး၊ တောင်ကြီး၊ ဆိုက်ခေါင်ရွာ၊ နမ့်ခုတ်ရွာ၊ ဟိုနမ့်၊ နောင် တောင်း၊ ဘုရားဖြူ၊ ဒုံလိတန် ဘက်ကရော။ ဟိုပုံး၊ ဆီဆိုင်၊ မောက်မယ်၊ ပင်လောင်း(လိုင်ပေရွာ) ဘက်ကရော ပါတယ် ဒကာကြီး`။
ရှမ်းပြည်ဘက်က ပအိုဝ်းတွေ များပါတယ်။ ရှမ်း(မြောက်) ကပလောင် တိုင်းရင်းသူ ၈ ယောက်ရယ်။ စစ်ကိုင်းတိုင်း(အ ထက်ပိုင်း)က နာဂ တိုင်းရင်းသူ ၂၄ ယောက်ရယ်။ နာဂကတော့ လေရှီးမြို့နယ်၊ ပန်ဆယ်ရွာတို၊ လဟယ်ဘက်က များပါတယ်။ ချင်း တိုင်းရင်းသူ ၁ ယောက်၊ ဗမာမိန်းကလေး ၁၁ ယောက်ဆို တော့ လောလောဆယ် စုစုပေါင်း ၉၀ ပေါ့နော်။ လူဝတ်ကြောင် က ၈၈ ယောက်။ သီလရှင်ဝတ် ဆရာလေးက ၂ ပါးရှိပါတယ် ဒကာကြီး`။
စာရေးသူ မေးသမျှကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဖြေနေသူမှာ ဧ ရိပ်မွန် ၂ ၊ အမျိုးသမီး စောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာမှ တာဝန်ခံအုပ် ချုပ်သူ ဆရာလေး ဒေါ်ပညာစာရီ ဖြစ်သည်။ ဆရာလေးခေါ် ပ ညာစာရီသည် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း၊ မန်တုံဇာတိဖြစ်ပြီး ပ လောင်လူမျိုး ဖြစ်သည်။ လူနာမည် ဒေါ်အေးအေးအောင် ဖြစ် ပြီး ယခုအခါ သီလရှင်ဝတ်ဖြင့် ဧရိပ်မွန် ၂ မှ အမျိုးသမီးငယ် ကလေးများကို စောင့်ရှောက်နေပါသည်။ မှတ်မှတ်ရရ ဇွန်လ ၅ ရက် နယုန်လပြည့်နေ့တွင် တွေ့ဆုံမှတ်တမ်း ယူခဲ့ပါသည်။
ဧရိပ်မွန် ၂ သည် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ချောင်းဦးမြို့၊ မြို့သစ် ရပ်ကွက်၊ ဘူတာလမ်းတွင် တည်ရှိပါသည်။ စာရေးသူ၏ ဇာတိ ဖြစ်သော ချောင်းဦးမြို့သည် မန္တလေး-မုံရွာ ကားလမ်းပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး၊ မုံရွာမြို့နှင့် ၁၄ မိုင်အကွာတွင် ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် စာရေးသူ၏ ဇာတိမြေမှာ အညာမြေဖြစ်ပြီး၊ အညာဒေသ၏ အ မျိုးသမီး စောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာ ဧရိပ်မွန် ၂ တွင် ပအိုဝ်း၊ ပလောင်၊ နာဂ၊ ချင်းစသော တောင်ပေါ်သူကလေးများ နေထိုင် ကြသည်မှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းနေသည်။ ပရဟိတရပ် ဝန်းတစ်ခု ဖြစ်သော ဧည့်ရိပ်မွန် ၂ အကြောင်းကို အသေးစိတ် မဟုတ်သော်ငြား အတော်အသင့် ပြည့်စုံရန် စာရေးဆရာ မောင်မောင်ချစ်ဦး(မုံရွာ) ရေးသားထားသော `သမီးတို့ရဲ့ ဧရိပ် မွန်` စာအုပ်ကို ကိုးကားခဲ့ပါသည်။ ဧရိပ်မွန် ၂ ရဲ့ ကျောင်းအ ကျိုးတော်ဆောင် ဆရာဦးသာအောင် (စာရေးဆရာ၊ ချမ်းသာ အောင်- ချောင်းဦး)နှင့် စကားပြော မေးမြန်းချက်များမှ အချက် အလက်များရရှိခဲ့ပါသည်။
`ဧရိပ်မွန်` ဟူသော အမည်မှာ နေ့သင့်နံသင့် ဗေဒင်ကိန်း ခန်းအရ မှည့်ခေါ်ခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပါ။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ မေလတွင် သီ လရှင်ဆရာကြီး ဒေါ်ခေမာနန္ဒီစတင် တည်ထောင်စဉ်က `ဧရိပ် မွန်`ဟူ၍ မဟုတ်သေးပါ။ `သီလရှင် စာသင်တိုက်နှင့် မိဘမဲ့ အမျိုးသမီးကလေးများ စောင့်ရှောက်ရေးကျောင်း` ဆိုသော နာမည်နှင့် စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ `ဧရိပ်မွန်`ဟူသော အ မည်ပြောင်းလဲရခြင်းမှာ ဒါရိုက်တာကြီးမြင့် ရိုက်ကူးခဲ့သော `ကြည်ပြာ`ဟူသော ထိုခေတ်ရုပ်ရှင်ကားကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကြည်ပြာဇာတ်ကားမှာ စာရေးဆရာမ ရွှေသဉ္စာ၏ `ဟိုလောင် ပန်းပွင့် ဘယ်ဂုဏ်ကြောင့် ဝံ့မတုန်` ဆိုသော ဝတ္ထု၊ မန္တလေး မြို့ အောင်မြေသာစံ မြို့နယ်၊ နန်းရှေ့မှာ ယနေ့ထက်တိုင် ရှိနေ သော ဧည့်ရိပ်မွန် ၁ ကို အခြေခံရိုက်ကူးခဲ့သော ကြည်ပြာဇာတ် ကားဖြစ်တည်ရာ နေရာ။ သီလရှင် ဆရာကြီး ဒေါ်ခေမာနန္ဒီ၏ ထိုနေရာ၊ ထိုကျောင်းတွင် ထိုဇာတ်ကားရိုက်စဉ် ဝတ္ထုဇာတ်လမ်း ပါ။ ဧရိပ်မွန်ဟူသော ဆိုင်းဘုတ်ကို လူတိုင်းနှစ်သက်၍ ပါးစပ် ဖျားရေပန်းစားရာမှ သီလရှင်ဆရာကြီး ကိုယ်တိုင် သဘောကျ မိပြီး ယနေ့ထက်တိုင် ဧရိပ်မွန်ဟူသော အမည်ကို လက်ခံ၍ မန္တ လေးမြို့တွင် ဧရိပ်မွန် ၁ နှင့် စာရေးသူတို့၏ ချောင်းဦးမြို့တွင် ဧရိပ်မွန် ၂ တို့ ရှိနေပါသည်။
ယနေ့ ချောင်းဦးမြို့ရှိ ဧရိပ်မွန် ၂ အကြောင်း ပြောရလျှင်၊ ရေးသားရမည် ဆိုလျှင် ယခင်ရထား ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီး၊ နောက်ပိုင်း ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ သော ဘဘဦးဝင်းစိန် အကြောင်းမပါလျှင် မဖြစ်ပေ။ အရေးကြီး ဆုံး အခန်းကဏ္ဍတွင် တစ်ချိန်က ပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ ယခု ယနေ့အချိန် ထိ ဧရိပ်မွန် ၂ ၏ ဖခင်ရင်းသဖွယ် စောင့်ရှောက်နေသူမှာ ဝန် ကြီးဟောင်း ဦးဝင်းစိန်ပင် ဖြစ်သည်။
တောင်ပေါ် တိုင်းရင်းသူ လေးများ၏ ရင်ခွင် ဧရိပ်မွန် ၂ ကို ၆-၁၀-၁၉၉၅ တွင် စတင် ပန္နက်ရိုက်ခဲ့ပြီး၊ ၁၇-၉-၁၉၉၆ တွင် ကျောင်းဖွင့်ပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းဖွင့်စက ကျောင်း၏ တာဝန်ခံ အုပ်ချုပ်စောင့်ရှောက် ပေးရသူမှာ သီလရှင်ဆရာကြီး ဒေါ်ဓမ္မေသီ ဖြစ်ပါသည်။ သူငယ်တန်း ၁၁ ဦးမှသည် ဒသမတန်း ၆ ဦးအထိ၊ ကျောင်းမနေ ၂ ဦးအပါအဝင်ဆိုလျှင် ၁၉၉၆ ခုနှစ် ဧရိပ်မွန် ၂ ဖွင့်ကာစ အင်အားမှာ ၁၁၁ ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ကြီး (ငြိမ်း) ဦးဝင်းစိန်နှင့် ဆရာကြီး ဒေါ်ဓမ္မေသီတို့၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ကျောင်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင့် ကြပ်မတ်မှု ကော်မတီ သီလရှင် ဆရာကြီး ဒေါ်နန္ဒထေရီ တာဝန်ခံ၍ အတွင်းရေးမှူး တာဝန်ယူ စောင့်ရှောက်ခဲ့ပါသည်။ ဆရာကြီး ဒေါ်ဓမ္မေသီ၏ ဦးဆောင်မှု၊ ဒေါ်နန္နထေရီ၏ လက်တွဲစောင့်ရှောက်မှု များကြောင့် ဧရိပ်မွန် ၂ သည် လာရောက်ခိုလှုံကြသော ပအိုဝ်း၊ ချင်း၊ ရှမ်းပလောင်၊ နာဂ၊ ဗမာမိန်းကလေးငယ်များ အတွက် ခိုလှုံရာ နေရာအမှန်၊ အားကိုးရာ စောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာအမှန် ဖြစ်လေတော့ ဖခင် သဖွယ် ဦးဆောင်ခဲ့သူ၊ လမ်းညွှန်ခဲ့သူ ဦးဝင်းစိန်နှင့် တာဝန်ရှိ လူကြီးများ အတွက် အလွန်အင်မတန် အားဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ ချောင်းဦးမြို့အတွက် ဂုဏ်ယူစရာ နေရာ၊ ပရဟိတလုပ်ငန်း စိတ်ဝင်စား သူများအတွက် ပါဝင်ကူညီခွင့်ရသော ရပ်ဝန်း၊ ခို ကိုးရာ မဲ့နေသော အမျိုးသမီး ငယ်ကလေးများအတွက် မိဘနှင့် မခြား အတတ်နိုင်ဆုံး နွေးထွေးလုံခြုံမှု ပေးနေသော ဂေဟာ တစ်ခု ဖြစ်သော ဧရိပ်မွန် ၂ ၏ စည်းမျဉ်းများကလည်း နေထိုင် သူ မိန်းကလေးငယ်များ၏ ဘဝအတွက် အလွန်အင်မတန် တန် ဖိုးရှိလှပါသည်။ အချိန်ကို တန်ဖိုးရှိစေပါသည်။
သမီးငယ် လေးများ၏ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် နေ့စဉ်အ ချိန် ဇယားမှာ နံနက် ၅ နာရီခွဲမှ စတင်ပါသည်။ နံနက် ၅ နာရီ ခွဲမှ ၆ နာရီခွဲ ထိသည် သမီးငယ် လေးများ၏ ကိုယ်လက်သန့် စင် ဘုရားဝတ်ပြုခြင်းနှင့် သြဝါဒ ခံယူခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၆ နာရီခွဲ မှ ၇ နာရီမှာ ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်ခန်း၊ ၇ နာရီမှ ၈ နာရီ သန့် ရှင်းရေး လုပ်ခြင်းနှင့် ရေချိုးခြင်း၊ ၈ နာရီ နံနက်စာ ထမင်းစား၊ ၈ နာရီခွဲ ကျောင်းသွား၊ ၁၂ နာရီ နေ့လယ်စာ ထမင်းစား၊ ညနေ ၄ နာရီ ကျောင်းဆင်းလာ၍ မိမိ၏ ဂေဟာ ဧရိပ်မွန် ပြန်ရောက် ပါက ညနေ ၅ နာရီခွဲထိ သန့်ရှင်းရေး စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျန်းမာ ရေး လေ့ကျင့်ခန်း၊ ၅ နာရီခွဲ ထမင်းစားပြီး ၆ နာရီမှ ၆ နာရီခွဲထိ ဘုရားဝတ်ပြုခြင်းနှင့် သြဝါဒ ခံယူခြင်း ၆ နာရီခွဲမှ ၇ နာရီထိမှာ ဗဟုသုတများ လေ့လာကြည့်ချိန်၊ ညနေ ၇ နာရီမှ ၁၀ နာရီခွဲ ထိမှာ စာကြည့်ချိန်ဖြစ်ပြီး၊ ည ၁၀ နာရီခွဲမှာ မီးပိတ် အိပ်ချိန်ဖြစ် ပါသည်။ ကောင်းလိုက်သည့် အချိန်ဇယား၊ တန်ဖိုးရှိလိုက်သည့် အချိန်ဇယား အခြေခံပညာ ကလေးများသာမက အရွယ်ရောက် ပြီး လူရွယ်၊ လူလတ်အပါအဝင် လူကြီးအထိ အားလုံး လိုက်နာ ကျင့်သုံးပါက တန်ဖိုးရှိသော လူသားတစ်ယောက် ဖြစ်စေနိုင် သည့် အချိန်ဇယား ဖြစ်သည်။
ဧရိပ်မွန်၏ အမျိုးသမီးငယ် ကလေးများအတွက် စားဝတ် နေရေးသာ မကဘဲ ဘဝတန်ဖိုးရှိစေမည့် တစ်ရက် ၂ ခါ ဘုရား ဝတ်ပြုခြင်းနှင့် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးနှင့် သစ်ပင် ပန်းမန် ရေလောင်းပေါင်းသင်ရခြင်း ဆိုသော စည်းကမ်းနှင့် အ သိပညာ၊ အကျင့်တို့မှာ အလွန်အင်မတန် တန်ဖိုးရှိလှပါသည်။ လူသား၏တန်ဖိုးသာမက မိမိပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကမ္ဘာကြီးအ တွက် အထောက်အကူပြုသော အလေ့အကျင့်နှင့် စည်းကမ်း များပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဧရိပ်မွန် ၂ မှ မဟုတ်သော အခြားအခြား သော သားငယ် သမီးငယ်တို့ ဤသို့ လေ့ကျင့်နေထိုင်ပါက မိဘ အုပ်ထိန်းသူများ ပြုစုပျိုးထောင် ပုံသွင်းပေးနိုင်ပါက ကလေး ငယ်များ၏ ဘဝ၊ သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် မည်မျှတန်ဖိုးရှိ လိုက်ပါမည်နည်းဟု စဉ်းစားမိပါ၏။
ချောင်းဦးမြို့ ဧရိပ်မွန် ၂ မှ သမီးငယ်လေးများ၏ ကျေးဇူး ရှင်များနှင့် အလှူရှင်များအား မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းနေသော အ သံမှာ ရင်တွင်းလှိုက်ဖို၍ ကြက်သီးမွေးညင်း ထမိပါ၏။ မိမိတို့၏ ဧရိပ်မွန်သို့ လာရောက်လေ့လာသူ၊ လှူဒါန်းသူများ၊ ဧည့်သည် များအပေါ် ဧည့်ဝတ်ပျူငှာ ကျေပွန်မှုမှာ နွေးထွေးလှပါ၏။ သူတို့ လေးတွေ၏ ဘုရားဝတ်ပြုရာ ဘုရားစင်နှင့် ဘုရားခန်း၊ ဘုရား ပန်းနှင့် ဆွမ်း၊ ရေတော်၊ ဆီမီး ကပ်လှူပူဇော်ထားပုံမှာ သာဓုအ ကြိမ်ကြိမ် ခေါ်ချင်စရာ။ သမီးငယ်လေးများ စိုက်ပျိုးထားသော စိုက်ခင်းများ၊ ကစားကွင်းများနှင့် စာကျက်ရန် စာသင်ခန်းမ၊ ဗ ဟုသုတ အလို့ငှာ စာကြည့်တိုက်နှင့် သန့်ရှင်း သပ်ရပ်မှုများကို တစ်ခါတစ်ခေါက် လာရောက်မြင်တွေ့ စေချင်ကြောင်းပါဗျာ။
Tags # ဆောင်းပါး
About Kanbawza Tai News
on June 29, 2020
Kanbawza Tai Broadcasting
​​​​​​တောင်ကြီးတွင် လူငယ်တစ်ဦးကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီး​​ခေါ်ဆောင်သွား
တောင်ကြီးမြို့၊ မြို့မ​စျေး၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်းမ​ပေါ်​၌ လူငယ် တစ်ဦးကို ယနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်၊ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီး​ခေါ်​ဆောင်...
​MRTV နှင့် MRTV Live Page များကို Facebook က ဖယ်ရှား
နိုင်ငံပိုင် ရုပ်သံလိုင်း၏ Facebook စာမျက်နှာများ ဖြစ်သည့် မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား MRTV ၊ MRTV Live စာမျက်နှာတို့ကို ယ​နေ့ ​ဖေ​ဖော်ဝါ...
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီမှ ဖမ်းဆီးထားသူ ၈၀ ကျော်ရှိ
ကမ္ဘောဇတိုင်း . ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီမှ ဖမ်းဆီးထားသူ ၈၄ ဦး ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိ...
​စစ်​ကောင်စီနှင့် ပူး​ပေါင်းသည့် ဝန်ထမ်းများကို အ​ရေးယူနိုင်​ရေး ကြိုးပမ်းမည်ဟု CRSSH ​ကြေညာ
အာဏာသိမ်း စစ်​ကောင်စီ၏ တရားမဝင် လှုပ်ရှား ​​ဆောင်ရွက်မှုများတွင် ပူး​​ပေါင်း ပါဝင်ခဲ့ကြသည့် ဝန်ထမ်းများကို တည်ဆဲဥပ​ဒေများအရ အ​ရေးယူ ​ဆောင်ရွ...
​တောင်ကြီးမြို့ရှိ ဟိုတယ် ၄ ခုတွင် မိုင်းထောင်ထားကြောင်း ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားလာသဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရှာဖွေနေ
ကမ္ဘောဇတိုင်း . တောင်ကြီးမြို့၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းပေါ်ရှိ UCT ဟိုတယ် အပါအဝင် ဟိုတယ် ၄ ခုတွင် မိုင်းထောင်ထားကြောင်း ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွ...
Archive Mar 01 (2) Feb 28 (3) Feb 27 (2) Feb 26 (2) Feb 25 (3) Feb 24 (6) Feb 23 (2) Feb 22 (4) Feb 21 (6) Feb 20 (2) Feb 19 (5) Feb 18 (5) Feb 17 (7) Feb 16 (4) Feb 15 (3) Feb 14 (4) Feb 13 (6) Feb 12 (5) Feb 11 (4) Feb 10 (5) Feb 09 (6) Feb 08 (3) Feb 05 (7) Feb 04 (10) Feb 03 (9) Feb 02 (10) Feb 01 (9) Jan 31 (10) Jan 30 (14) Jan 29 (14) Jan 28 (13) Jan 27 (15) Jan 26 (13) Jan 25 (13) Jan 24 (5) Jan 23 (12) Jan 22 (10) Jan 21 (10) Jan 20 (15) Jan 19 (12) Jan 18 (12) Jan 17 (15) Jan 16 (11) Jan 15 (17) Jan 14 (13) Jan 13 (12) Jan 12 (11) Jan 11 (5) Jan 10 (12) Jan 09 (9) Jan 08 (16) Jan 07 (12) Jan 06 (10) Jan 05 (13) Jan 04 (9) Jan 03 (8) Jan 02 (10) Jan 01 (9) Dec 31 (9) Dec 30 (14) Dec 29 (17) Dec 28 (14) Dec 27 (11) Dec 26 (3) Dec 25 (9) Dec 24 (17) Dec 23 (11) Dec 22 (15) Dec 21 (8) Dec 20 (8) Dec 19 (9) Dec 18 (11) Dec 17 (10) Dec 16 (16) Dec 15 (9) Dec 14 (11) Dec 13 (9) Dec 12 (9) Dec 11 (11) Dec 10 (9) Dec 09 (5) Dec 08 (9) Dec 07 (13) Dec 06 (11) Dec 05 (12) Dec 04 (11) Dec 03 (8) Dec 02 (7) Dec 01 (9) Nov 30 (10) Nov 29 (12) Nov 28 (8) Nov 27 (10) Nov 26 (15) Nov 25 (13) Nov 24 (8) Nov 23 (11) Nov 22 (10) Nov 21 (11) Nov 20 (13) Nov 19 (11) Nov 18 (11) Nov 17 (11) Nov 16 (8) Nov 15 (10) Nov 14 (11) Nov 13 (15) Nov 12 (13) Nov 11 (5) Nov 10 (7) Nov 09 (9) Nov 08 (9) Nov 07 (11) Nov 06 (12) Nov 05 (13) Nov 04 (12) Nov 03 (9) Nov 02 (10) Nov 01 (11) Oct 31 (7) Oct 30 (11) Oct 29 (8) Oct 28 (11) Oct 27 (13) Oct 26 (11) Oct 25 (12) Oct 24 (14) Oct 23 (10) Oct 22 (13) Oct 21 (7) Oct 20 (10) Oct 19 (15) Oct 18 (7) Oct 17 (13) Oct 16 (12) Oct 15 (16) Oct 14 (12) Oct 13 (17) Oct 12 (13) Oct 11 (14) Oct 10 (8) Oct 09 (13) Oct 08 (11) Oct 07 (9) Oct 06 (16) Oct 05 (12) Oct 04 (15) Oct 03 (18) Oct 02 (13) Oct 01 (11) Sep 30 (14) Sep 29 (18) Sep 28 (14) Sep 27 (11) Sep 26 (12) Sep 25 (14) Sep 24 (16) Sep 23 (11) Sep 22 (10) Sep 21 (12) Sep 20 (16) Sep 19 (12) Sep 18 (14) Sep 17 (12) Sep 16 (14) Sep 15 (12) Sep 14 (15) Sep 13 (16) Sep 12 (16) Sep 11 (12) Sep 10 (9) Sep 09 (14) Sep 08 (15) Sep 07 (11) Sep 06 (12) Sep 05 (18) Sep 04 (12) Sep 03 (14) Sep 02 (14) Sep 01 (13) Aug 31 (11) Aug 30 (11) Aug 29 (13) Aug 28 (15) Aug 27 (12) Aug 26 (17) Aug 25 (13) Aug 24 (16) Aug 23 (16) Aug 22 (8) Aug 21 (15) Aug 20 (11) Aug 19 (15) Aug 18 (11) Aug 17 (11) Aug 16 (6) Aug 15 (7) Aug 14 (12) Aug 13 (14) Aug 12 (16) Aug 11 (12) Aug 10 (10) Aug 09 (16) Aug 08 (11) Aug 07 (8) Aug 06 (12) Aug 05 (16) Aug 04 (13) Aug 03 (9) Aug 02 (6) Aug 01 (11) Jul 31 (8) Jul 30 (10) Jul 29 (11) Jul 28 (13) Jul 27 (12) Jul 26 (15) Jul 25 (13) Jul 24 (14) Jul 23 (11) Jul 22 (12) Jul 21 (12) Jul 20 (12) Jul 19 (8) Jul 18 (9) Jul 17 (9) Jul 16 (7) Jul 15 (16) Jul 14 (9) Jul 13 (13) Jul 12 (8) Jul 11 (9) Jul 10 (14) Jul 09 (13) Jul 08 (16) Jul 07 (12) Jul 06 (12) Jul 05 (10) Jul 04 (11) Jul 03 (10) Jul 02 (17) Jul 01 (16) Jun 30 (12) Jun 29 (14) Jun 28 (9) Jun 27 (10) Jun 26 (8) Jun 25 (12) Jun 24 (13) Jun 23 (19) Jun 22 (7) Jun 21 (14) Jun 20 (10) Jun 19 (16) Jun 18 (11) Jun 17 (14) Jun 16 (12) Jun 15 (10) Jun 14 (10) Jun 13 (9) Jun 12 (8) Jun 11 (10) Jun 10 (14) Jun 09 (13) Jun 08 (10) Jun 07 (6) Jun 05 (15) Jun 04 (10) Jun 03 (9) Jun 02 (10) Jun 01 (8) May 31 (11) May 30 (11) May 29 (12) May 28 (10) May 27 (15) May 26 (10) May 25 (16) May 24 (7) May 23 (17) May 22 (6) May 21 (8) May 20 (4) May 19 (13) May 18 (13) May 17 (15) May 16 (16) May 15 (12) May 14 (9) May 13 (9) May 12 (12) May 11 (12) May 10 (9) May 09 (12) May 08 (12) May 07 (16) May 06 (11) May 05 (11) May 04 (8) May 03 (14) May 02 (12) May 01 (13) Apr 30 (8) Apr 29 (13) Apr 28 (12) Apr 27 (10) Apr 26 (9) Apr 25 (8) Apr 24 (20) Apr 23 (10) Apr 22 (6) Apr 21 (11) Apr 20 (14) Apr 19 (17) Apr 18 (9) Apr 17 (12) Apr 16 (11) Apr 15 (11) Apr 14 (14) Apr 13 (17) Apr 12 (13) Apr 11 (16) Apr 10 (12) Apr 09 (8) Apr 08 (11) Apr 07 (11) Apr 06 (11) Apr 05 (4) Apr 04 (12) Apr 03 (9) Apr 02 (9) Apr 01 (11) Mar 31 (16) Mar 30 (15) Mar 29 (14) Mar 28 (15) Mar 27 (18) Mar 26 (17) Mar 25 (12) Mar 24 (13) Mar 23 (10) Mar 22 (8) Mar 21 (10) Mar 20 (13) Mar 19 (13) Mar 18 (9) Mar 17 (13) Mar 16 (9) Mar 15 (9) Mar 14 (7) Mar 13 (11) Mar 12 (14) Mar 11 (5) Mar 10 (8) Mar 09 (9) Mar 08 (7) Mar 07 (7) Mar 06 (15) Mar 05 (10) Mar 04 (6) Mar 03 (5) Mar 02 (8) Mar 01 (8) Feb 29 (5) Feb 28 (9) Feb 27 (10) Feb 26 (7) Feb 25 (9) Feb 24 (10) Feb 23 (4) Feb 22 (8) Feb 21 (9) Feb 20 (10) Feb 19 (9) Feb 18 (8) Feb 17 (7) Feb 16 (7) Feb 15 (11) Feb 14 (8) Feb 13 (15) Feb 12 (1) Feb 11 (7) Feb 10 (12) Feb 09 (7) Feb 08 (3) Feb 07 (9) Feb 06 (9) Feb 05 (13) Feb 04 (4) Feb 03 (7) Feb 02 (12) Feb 01 (9) Jan 31 (10) Jan 30 (9) Jan 29 (11) Jan 28 (9) Jan 27 (8) Jan 26 (8) Jan 25 (5) Jan 24 (10) Jan 23 (11) Jan 22 (11) Jan 21 (11) Jan 20 (8) Jan 19 (6) Jan 18 (4) Jan 17 (5) Jan 16 (16) Jan 15 (11) Jan 14 (10) Jan 13 (10) Jan 12 (6) Jan 11 (8) Jan 10 (3) Jan 09 (6) Jan 08 (11) Jan 07 (2) Jan 06 (7) Jan 05 (8) Jan 04 (10) Jan 03 (10) Jan 02 (12) Jan 01 (11) Dec 31 (4) Dec 30 (8) Dec 29 (6) Dec 28 (10) Dec 27 (6) Dec 26 (11) Dec 25 (9) Dec 24 (7) Dec 23 (5) Dec 22 (4) Dec 21 (7) Dec 20 (10) Dec 19 (12) Dec 18 (6) Dec 17 (3) Dec 16 (11) Dec 15 (11) Dec 14 (12) Dec 13 (10) Dec 12 (1) Dec 11 (8) Dec 10 (6) Dec 09 (4) Dec 08 (6) Dec 07 (7) Dec 06 (11) Dec 05 (11) Dec 04 (9) Dec 03 (7) Dec 02 (5) Dec 01 (4) Nov 30 (7) Nov 29 (10) Nov 28 (9) Nov 27 (7) Nov 26 (6) Nov 25 (5) Nov 24 (7) Nov 23 (6) Nov 22 (8) Nov 21 (8) Nov 20 (7) Nov 19 (3) Nov 18 (5) Nov 17 (7) Nov 16 (6) Nov 15 (5) Nov 14 (6) Nov 13 (6) Nov 11 (1) Nov 10 (1) Nov 09 (6) Nov 08 (8) Nov 07 (4) Nov 06 (4) Nov 05 (3) Nov 04 (4) Nov 03 (5) Nov 02 (2) Nov 01 (5) Oct 31 (7) Oct 30 (6) Oct 29 (4) Oct 28 (3) Oct 27 (8) Oct 26 (4) Oct 25 (5) Oct 24 (13) Oct 23 (6) Oct 22 (7) Oct 21 (1) Oct 20 (7) Oct 19 (6) Oct 18 (9) Oct 17 (5) Oct 16 (5) Oct 15 (2) Oct 14 (6) Oct 13 (9) Oct 12 (3) Oct 11 (7) Oct 10 (7) Oct 09 (11) Oct 08 (7) Oct 07 (6) Oct 06 (2) Oct 05 (9) Oct 04 (5) Oct 03 (14) Oct 02 (8) Oct 01 (9) Sep 30 (4) Sep 29 (8) Sep 28 (8) Sep 27 (8) Sep 25 (15) Sep 24 (9) Sep 23 (3) Sep 22 (6) Sep 21 (10) Sep 20 (10) Sep 19 (9) Sep 18 (10) Sep 17 (7) Sep 16 (5) Sep 15 (7) Sep 14 (10) Sep 13 (8) Sep 12 (10) Sep 11 (10) Sep 10 (9) Sep 09 (5) Sep 08 (9) Sep 07 (7) Sep 06 (8) Sep 05 (12) Sep 04 (11) Sep 03 (8) Sep 02 (4) Sep 01 (4) Aug 31 (8) Aug 30 (9) Aug 29 (12) Aug 28 (11) Aug 27 (8) Aug 26 (9) Aug 25 (8) Aug 24 (9) Aug 23 (9) Aug 22 (15) Aug 21 (7) Aug 20 (6) Aug 19 (6) Aug 18 (13) Aug 17 (8) Aug 16 (11) Aug 15 (2) Aug 14 (7) Aug 13 (4) Aug 12 (8) Aug 11 (7) Aug 10 (9) Aug 09 (7) Aug 08 (10) Aug 07 (9) Aug 06 (5) Aug 05 (8) Aug 04 (8) Aug 03 (7) Aug 02 (12) Aug 01 (15) Jul 31 (6) Jul 30 (12) Jul 29 (6) Jul 28 (11) Jul 27 (10) Jul 26 (13) Jul 25 (13) Jul 24 (11) Jul 23 (9) Jul 22 (5) Jul 21 (14) Jul 20 (15) Jul 19 (11) Jul 18 (8) Jul 17 (9) Jul 16 (9) Jul 15 (10) Jul 14 (12) Jul 13 (11) Jul 12 (13) Jul 11 (13) Jul 10 (6) Jul 09 (3) Jul 08 (4) Jul 07 (6) Jul 06 (8) Jul 05 (7) Jul 04 (4) Jul 03 (5) Jul 02 (3) Jul 01 (2) Jun 28 (3) Jun 27 (8) Jun 26 (5) Jun 25 (6) Jun 24 (4) Jun 23 (5) Jun 22 (2) Jun 21 (6) Jun 20 (10) Jun 19 (8) Jun 18 (10) Jun 17 (2) Jun 15 (6) Jun 14 (2) Jun 13 (4) Jun 12 (5) Jun 11 (3) Jun 10 (4) Jun 08 (5) Jun 07 (7) Jun 06 (5) Jun 05 (3) Jun 04 (3) Jun 03 (5) Jun 02 (3) May 31 (4) May 30 (10) May 29 (8) May 28 (7) May 27 (2) May 26 (1) May 25 (5) May 24 (5) May 23 (7) May 22 (6) May 21 (5) May 19 (4) May 18 (13) May 17 (3) May 16 (9) May 15 (10) May 14 (7) May 13 (6) May 12 (5) May 11 (7) May 10 (1) May 09 (5) May 08 (3) May 07 (5) May 06 (5) May 05 (6) May 04 (4) May 03 (3) May 02 (9) May 01 (9) Apr 30 (7) Apr 29 (7) Apr 28 (3) Apr 27 (7) Apr 26 (9) Apr 25 (10) Apr 24 (7) Apr 23 (1) Apr 22 (8) Apr 21 (4) Apr 20 (3) Apr 19 (4) Apr 18 (7) Apr 17 (7) Apr 15 (6) Apr 14 (2) Apr 13 (5) Apr 12 (5) Apr 11 (8) Apr 10 (7) Apr 09 (5) Apr 08 (6) Apr 07 (1) Apr 06 (7) Apr 05 (6) Apr 04 (9) Apr 03 (6) Apr 02 (8) Mar 31 (6) Mar 30 (5) Mar 29 (7) Mar 28 (8) Mar 27 (7) Mar 26 (11) Mar 25 (6) Mar 24 (4) Mar 23 (9) Mar 22 (4) Mar 21 (4) Mar 20 (9) Mar 19 (9) Mar 18 (6) Mar 17 (4) Mar 16 (5) Mar 15 (12) Mar 14 (11) Mar 13 (8) Mar 12 (5) Mar 11 (10) Mar 10 (4) Mar 09 (11) Mar 08 (8) Mar 07 (13) Mar 06 (3) Mar 05 (4) Mar 04 (6) Mar 03 (1) Mar 02 (2) Mar 01 (10) Feb 28 (11) Feb 26 (5) Feb 25 (5) Feb 24 (11) Feb 23 (2) Feb 22 (9) Feb 21 (4) Feb 20 (4) Feb 19 (4) Feb 18 (3) Feb 17 (7) Feb 16 (11) Feb 15 (5) Feb 14 (8) Feb 13 (12) Feb 12 (8) Feb 11 (8) Feb 10 (1) Feb 09 (8) Feb 08 (9) Feb 07 (10) Feb 06 (11) Feb 05 (7) Feb 04 (8) Feb 03 (4) Feb 02 (9) Feb 01 (6) Jan 31 (8) Jan 30 (6) Jan 29 (4) Jan 28 (6) Jan 27 (5) Jan 26 (6) Jan 25 (6) Jan 24 (14) Jan 23 (9) Jan 22 (7) Jan 21 (5) Jan 20 (6) Jan 19 (12) Jan 18 (9) Jan 17 (10) Jan 16 (6) Jan 15 (5) Jan 14 (6) Jan 13 (4) Jan 12 (5) Jan 11 (9) Jan 10 (10) Jan 09 (6) Jan 08 (6) Jan 07 (7) Jan 06 (6) Jan 05 (7) Jan 04 (8) Jan 03 (12) Jan 02 (11) Dec 31 (13) Dec 30 (8) Dec 29 (10) Dec 28 (7) Dec 27 (11) Dec 26 (3) Dec 25 (10) Dec 24 (14) Dec 23 (5) Dec 22 (7) Dec 21 (7) Dec 20 (9) Dec 19 (7) Dec 18 (5) Dec 17 (7) Dec 16 (3) Dec 15 (6) Dec 14 (12) Dec 13 (10) Dec 12 (7) Dec 11 (17) Dec 10 (12) Dec 09 (5) Dec 08 (6) Dec 07 (10) Dec 06 (14) Dec 05 (8) Dec 04 (5) Dec 03 (10) Dec 02 (6) Dec 01 (11) Nov 30 (10) Nov 29 (8) Nov 28 (12) Nov 27 (2) Nov 26 (8) Nov 25 (5) Nov 24 (5) Nov 23 (4) Nov 22 (1) Nov 21 (18) Nov 20 (10) Nov 19 (8) Nov 18 (2) Nov 17 (8) Nov 16 (17) Nov 15 (11) Nov 14 (5) Nov 13 (2) Nov 12 (3) Nov 11 (9) Nov 10 (15) Nov 09 (12) Nov 08 (5) Nov 07 (3) Nov 06 (5) Nov 05 (6) Nov 04 (2) Nov 03 (8) Nov 02 (7) Nov 01 (8) Oct 30 (9) Oct 29 (10) Oct 28 (7) Oct 27 (8) Oct 26 (10) Oct 25 (3) Oct 24 (5) Oct 23 (8) Oct 22 (6) Oct 21 (3) Oct 20 (5) Oct 19 (4) Oct 18 (12) Oct 17 (5) Oct 16 (11) Oct 15 (8) Oct 14 (5) Oct 13 (10) Oct 12 (12) Oct 11 (13) Oct 10 (3) Oct 09 (7) Oct 08 (5) Oct 07 (4) Oct 06 (3) Oct 05 (6) Oct 04 (16) Oct 03 (4) Oct 02 (6) Oct 01 (6) Sep 30 (2) Sep 29 (8) Sep 28 (8) Sep 27 (8) Sep 26 (9) Sep 25 (9) Sep 24 (6) Sep 23 (4) Sep 22 (10) Sep 21 (4) Sep 20 (5) Sep 19 (14) Sep 18 (13) Sep 17 (10) Sep 15 (1) Sep 14 (9) Sep 13 (1) Sep 12 (9) Sep 11 (5) Sep 10 (6) Sep 09 (5) Sep 08 (6) Sep 07 (8) Sep 06 (8) Sep 05 (6) Sep 04 (8) Sep 03 (10) Sep 02 (4) Sep 01 (7) Aug 31 (11) Aug 30 (9) Aug 29 (11) Aug 28 (4) Aug 27 (7) Aug 26 (4) Aug 25 (6) Aug 24 (7) Aug 23 (10) Aug 22 (10) Aug 21 (8) Aug 20 (6) Aug 19 (8) Aug 18 (9) Aug 17 (16) Aug 16 (10) Aug 15 (1) Aug 14 (9) Aug 13 (6) Aug 12 (5) Aug 11 (12) Aug 10 (13) Aug 09 (16) Aug 08 (6) Aug 07 (9) Aug 06 (5) Aug 05 (9) Aug 04 (13) Aug 03 (11) Aug 02 (15) Aug 01 (8) Jul 31 (7) Jul 30 (3) Jul 29 (8) Jul 28 (12) Jul 27 (10) Jul 26 (14) Jul 25 (7) Jul 24 (5) Jul 23 (7) Jul 22 (5) Jul 21 (12) Jul 20 (12) Jul 19 (5) Jul 18 (6) Jul 17 (4) Jul 16 (9) Jul 15 (1) Jul 14 (3) Jul 13 (5) Jul 12 (13) Jul 11 (6) Jul 10 (5) Jul 09 (10) Jul 08 (3) Jul 07 (13) Jul 06 (12) Jul 05 (13) Jul 03 (12) Jul 02 (5) Jun 30 (11) Jun 29 (9) Jun 28 (13) Jun 27 (2) Jun 26 (1) Jun 25 (7) Jun 24 (6) Jun 23 (12) Jun 22 (12) Jun 21 (15) Jun 20 (6) Jun 19 (3) Jun 18 (10) Jun 17 (4) Jun 16 (5) Jun 15 (8) Jun 14 (12) Jun 13 (9) Jun 12 (4) Jun 11 (8) Jun 10 (4) Jun 09 (7) Jun 08 (17) Jun 07 (13) Jun 06 (9) Jun 05 (8) Jun 04 (5) Jun 03 (5) Jun 02 (6) Jun 01 (10) May 31 (6) May 30 (4) May 28 (13) May 26 (7) May 25 (3) May 24 (8) May 23 (8) May 22 (10) May 21 (6) May 20 (6) May 19 (6) May 18 (7) May 17 (16) May 16 (8) May 15 (10) May 14 (10) May 13 (7) May 12 (7) May 11 (6) May 10 (15) May 09 (7) May 08 (11) May 07 (4) May 06 (5) May 05 (4) May 04 (6) May 03 (13) May 02 (5) May 01 (5) Apr 30 (19) Apr 29 (4) Apr 28 (8) Apr 27 (8) Apr 26 (14) Apr 25 (6) Apr 24 (11) Apr 23 (9) Apr 22 (3) Apr 21 (4) Apr 20 (7) Apr 19 (9) Apr 17 (5) Apr 16 (1) Apr 14 (3) Apr 13 (7) Apr 12 (11) Apr 11 (6) Apr 10 (10) Apr 09 (5) Apr 08 (6) Apr 07 (7) Apr 06 (8) Apr 05 (11) Apr 04 (11) Apr 03 (9) Apr 02 (7) Apr 01 (6) Mar 31 (8) Mar 30 (11) Mar 29 (8) Mar 28 (11) Mar 27 (9) Mar 26 (8) Mar 25 (6) Mar 24 (8) Mar 23 (15) Mar 22 (8) Mar 21 (7) Mar 20 (11) Mar 19 (11) Mar 18 (5) Mar 17 (9) Mar 16 (15) Mar 15 (12) Mar 14 (10) Mar 13 (15) Mar 12 (8) Mar 11 (5) Mar 10 (13) Mar 09 (6) Mar 08 (13) Mar 07 (10) Mar 06 (11) Mar 05 (9) Mar 04 (8) Mar 03 (9) Mar 01 (6) Feb 28 (11) Feb 27 (15) Feb 26 (14) Feb 25 (4) Feb 24 (10) Feb 23 (9) Feb 22 (14) Feb 21 (11) Feb 20 (16) Feb 19 (11) Feb 18 (6) Feb 17 (10) Feb 16 (13) Feb 15 (14) Feb 14 (9) Feb 13 (12) Feb 12 (11) Feb 11 (7) Feb 10 (8) Feb 09 (10) Feb 08 (15) Feb 07 (11) Feb 06 (6) Feb 05 (5) Feb 04 (6) Feb 03 (4) Feb 02 (7) Feb 01 (10) Jan 31 (9) Jan 30 (4) Jan 29 (8) Jan 27 (10) Jan 26 (11) Jan 25 (9) Jan 24 (7) Jan 23 (9) Jan 22 (8) Jan 21 (5) Jan 20 (8) Jan 19 (6) Jan 18 (10) Jan 17 (10) Jan 16 (6) Jan 15 (15) Jan 14 (8) Jan 13 (6) Jan 12 (10) Jan 11 (11) Jan 10 (13) Jan 09 (9) Jan 08 (1) Jan 07 (5) Jan 06 (8) Jan 05 (9) Jan 04 (8) Jan 03 (8) Jan 02 (5) Jan 01 (8) Dec 31 (3) Dec 30 (4) Dec 29 (5) Dec 28 (4) Dec 27 (4) Dec 26 (6) Dec 25 (7) Dec 24 (4) Dec 23 (5) Dec 22 (10) Dec 21 (10) Dec 20 (6) Dec 19 (7) Dec 18 (8) Dec 17 (3) Dec 16 (9) Dec 15 (8) Dec 14 (10) Dec 13 (6) Dec 12 (10) Dec 11 (6) Dec 10 (7) Dec 09 (3) Dec 08 (5) Dec 07 (12) Dec 06 (10) Dec 05 (11) Dec 04 (6) Dec 03 (4) Dec 02 (9) Dec 01 (7) Nov 30 (9) Nov 29 (6) Nov 28 (5) Nov 27 (8) Nov 26 (6) Nov 25 (6) Nov 24 (10) Nov 23 (8) Nov 22 (10) Nov 21 (10) Nov 20 (7) Nov 19 (5) Nov 18 (7) Nov 17 (8) Nov 16 (14) Nov 15 (8) Nov 14 (9) Nov 13 (10) Nov 12 (7) Nov 11 (7) Nov 10 (10) Nov 09 (9) Nov 08 (7) Nov 07 (7) Nov 06 (6) Nov 05 (4) Nov 04 (6) Nov 03 (8) Nov 02 (8) Nov 01 (8) Oct 31 (7) Oct 30 (5) Oct 29 (6) Oct 28 (6) Oct 27 (8) Oct 26 (11) Oct 25 (7) Oct 24 (4) Oct 23 (8) Oct 22 (6) Oct 21 (8) Oct 20 (8) Oct 19 (5) Oct 18 (5) Oct 17 (4) Oct 16 (7) Oct 15 (5) Oct 14 (4) Oct 13 (5) Oct 12 (10) Oct 11 (9) Oct 10 (5) Oct 09 (1) Oct 08 (5) Oct 07 (7) Oct 06 (6) Oct 05 (7) Oct 04 (5) Oct 03 (6) Oct 02 (5) Oct 01 (6) Sep 30 (4) Sep 29 (5) Sep 28 (1) Sep 27 (5) Sep 26 (11) Sep 25 (6) Sep 24 (4) Sep 23 (8) Sep 22 (6) Sep 21 (5) Sep 20 (6) Sep 19 (5) Sep 18 (9) Sep 17 (8) Sep 16 (6) Sep 15 (7) Sep 14 (9) Sep 13 (9) Sep 12 (10) Sep 11 (9) Sep 10 (5) Sep 09 (8) Sep 08 (10) Sep 07 (8) Sep 06 (10) Sep 05 (4) Sep 04 (10) Sep 03 (7) Sep 02 (7) Sep 01 (7) Aug 31 (11) Aug 30 (8) Aug 29 (9) Aug 28 (10) Aug 27 (5) Aug 26 (3) Aug 25 (8) Aug 24 (8) Aug 23 (9) Aug 22 (8) Aug 21 (12) Aug 20 (8) Aug 19 (8) Aug 18 (10) Aug 17 (10) Aug 16 (10) Aug 15 (10) Aug 14 (12) Aug 13 (9) Aug 12 (9) Aug 11 (10) Aug 10 (13) Aug 09 (9) Aug 08 (13) Aug 07 (13) Aug 06 (3) Aug 05 (12) Aug 04 (11) Aug 03 (11) Aug 02 (10) Aug 01 (11) Jul 31 (11) Jul 30 (7) Jul 29 (9) Jul 28 (9) Jul 27 (10) Jul 26 (8) Jul 25 (10) Jul 24 (7) Jul 23 (6) Jul 22 (8) Jul 21 (10) Jul 20 (12) Jul 19 (6) Jul 18 (6) Jul 17 (8) Jul 16 (7) Jul 15 (10) Jul 14 (11) Jul 13 (12) Jul 12 (10) Jul 11 (8) Jul 10 (13) Jul 09 (1) Jul 08 (11) Jul 07 (9) Jul 06 (12) Jul 05 (9) Jul 04 (8) Jul 03 (7) Jul 02 (7) Jul 01 (7) Jun 30 (6) Jun 29 (8) Jun 28 (7) Jun 27 (11) Jun 26 (10) Jun 25 (10) Jun 24 (9) Jun 23 (13) Jun 22 (9) Jun 21 (9) Jun 20 (9) Jun 19 (10) Jun 18 (5) Jun 17 (12) Jun 16 (11) Jun 15 (14) Jun 14 (9) Jun 13 (13) Jun 12 (14) Jun 11 (10) Jun 10 (14) Jun 09 (10) Jun 08 (17) Jun 07 (10) Jun 06 (15) Jun 05 (11) Jun 04 (9) Jun 03 (11) Jun 02 (10) Jun 01 (16) May 31 (14) May 30 (13) May 29 (14) May 28 (9) May 27 (18) May 26 (16) May 25 (24) May 24 (10) May 23 (9) May 22 (16) May 21 (8) May 20 (9) May 19 (9) May 18 (10) May 17 (13) May 16 (12) May 15 (10) May 14 (8) May 13 (5) May 12 (10) May 11 (10) May 10 (14) May 09 (10) May 08 (7) May 07 (12) May 06 (6) May 05 (11) May 04 (14) May 03 (3) May 02 (13) May 01 (16) Apr 30 (7) Apr 29 (11) Apr 28 (10) Apr 27 (8) Apr 26 (11) Apr 25 (9) Apr 24 (7) Apr 23 (5) Apr 22 (8) Apr 21 (7) Apr 20 (10) Apr 19 (11) Apr 18 (9) Apr 17 (3) Apr 16 (5) Apr 15 (6) Apr 14 (7) Apr 13 (6) Apr 12 (12) Apr 11 (12) Apr 10 (11) Apr 09 (12) Apr 08 (11) Apr 07 (14) Apr 06 (12) Apr 05 (12) Apr 04 (13) Apr 03 (13) Apr 02 (8) Apr 01 (4) Mar 31 (8) Mar 30 (9) Mar 29 (12) Mar 28 (14) Mar 27 (20) Mar 26 (7) Mar 25 (14) Mar 24 (13) Mar 23 (15) Mar 22 (18) Mar 21 (12) Mar 20 (9) Mar 19 (9) Mar 18 (12) Mar 17 (11) Mar 16 (14) Mar 15 (9) Mar 14 (15) Mar 13 (17) Mar 12 (10) Mar 11 (15) Mar 10 (9) Mar 09 (13) Mar 08 (12) Mar 07 (11) Mar 06 (16) Mar 05 (9) Mar 04 (8) Mar 03 (12) Mar 02 (10) Mar 01 (6) Feb 28 (2) Feb 27 (4) Feb 26 (7) Feb 25 (3) Feb 24 (5)
Shan Yo Ma Cement
Represents for Shan State, Myanmar
Ph ; +959 899 885 514
Adress ; Taunggyi , Shan State, Myanmar
Mail ; kanbawzatai.news@gmail.com
Visit to Facebook (Click)
Visit to VK (Click)
Visit to Twitter (Click)
Visit to Instagram (Click)